Maraoka: Ny hafanana mamaivay sy ny adihevitra mafana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Aogositra 2018 9:24 GMT
(Marihina fa tamin'ny 7 Jolay 2007 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Hatramin'izao, tena mafana ny volana Jolay any Maraoka, amin'ny maripana mahatratra any amin'ny 40 degre any. Na dia tsy dia nafana tahaka ny tamin'ny herintaona aza (2006), dia toa hita fa nijaly tokoa ireo Maraokana mponina (indrindra ireo vahiny monina eto). Nitaraina noho ny hafanana i Evelyn in Morocco, mponina ao Fez ary nilaza hoe “Tena mafana dia mafana izao eto Fes. Toy ny enta-mavesatra ny hafanana rehefa mivoaka any ivelany ianao.”
Toa somary nangatsiatsiaka kokoa i Rabat, araka ny Braveheart-does-the-Maghreb, izay niteny hoe:
Hiresaka momba ny hafanana eto aho, saingy rehefa nahita ity aho dia nanapa-kevitra ny tsy hanao izany indray. Tsara vintana aho fa na dia tamin'ny andro mafana indrindra aza; tena nangatsiatsiaka ny rivo-dranomasina ary namirifiry mihitsy aza tamin'ny alina. Mbola matory miaraka amin'ny bodofotsy izahay, ka tsy tokony hisy hitarainana noho izany eh?
Niaraka tamin'ny hafanan'ny lohataona ny adihevitra mafana. Nametra-panontaniana ny lahatsoratra iray tao amin'ny Reuters raha toa ka ny tenim-paritra ao Maraoka hoe darija no tokony atao fiteny ofisialin'i Maraoka, na dia tsy manana endrika an-tsoratra voafaritra mazava aza izany. Ny teny Arabo Lasitra Maoderina (aka “Fus'ha”) no fiteny ofisialy, raha ny Frantsay kosa no fiteny nampiasain'ny mpanjanaka tao Maraoka ho an'ny fandraharahana sy ny toekarena, ary ny gazetiboky sy ny gazety maro ihany koa. Ny The View from Fez no bilaogy voalohany namoaka ity tantara ity, ary nangataka ny hevitry ny mpamaky momba ilay lahatsoratra.
xoussef no voalohany namaly ary nilaza hoe:
Ilaina ny hanoratana ny fiteny Darija. Any amin'ny firenen-kafa, ny fahaizana mamaky sy manoratra dia efa ampy ahafahana misafidy ny fitaovana sy ny fampahalalam-baovao maro isankarazany, toy ny gazety, ny teny soratana dia mitovitovy amin'izay teny tononina am-bava. Ho an'ny Maraokana, mila mianatra ny fiteny vaovao iray manontolo ianao, fa tsy ny abidy ihany mba hamakiana gazety.
Moa ve misy ny fikasana hanaovana azy ho fiteny voasoratra? miharihary fa tsia.
Ilay bilaogera بْلا فْرَنْسِيَّه, izay midika hoe “tsy mila Frantsay” namaly hoe:
Tsy manohitra ny fampiasana ny Darija aho amin'ny fifandraisana amin'ny vahoaka ; Izany no ampiasana ny fitenim-paritra. Na izany aza, ny famadihana ny Darija ho amin'ny fiteny nosoratana, vazivazy tsotra izao ny fitenin'ny siansa . Ity antso ity dia avy amin'ireo izay tsy mankany amin'ny sekolim-panjakana ary tsy nianatra mihitsy ny fiteny Arabo ara-dalana (na amin'ny ankapobeny) na ireo mampiasa ny teny Arabo ho fiteny faharoa na fahatelo …. Tsy mahagaga fa frankôfonina izy rehetra.
Nanoratra ihany koa momba ilay lahatsoratra ny The Morocco Report :
Inona no azon'ny Maraokana atao? Tamin'ny mihintsan-dravina farany teo, navoaka i Nichane, ilay gazetiboky rahavavin'ny teny Frantsay TelQuel, dia nakatona avy hatrany (tamin'ny fiampangana tsy nisy ifandraisany), na dia efa niverina amin'ny laoniny aza izany amin'izao fotoana – io no gazetiboky voalohany navoaka tamin'ny teny darija. Mpihira, mpiangaly mozika rap, ireo avy amin'ny vazo miteny- mamokatra avokoa ny fitaovany rehetra amin'ny fiteny darija. Matetika amin'ny fiteny darija ny onjam-peo, matetika amin'ny fiteny darija ny 2M, ary misy ihany koa ny boky tononkalo amin'ny darija araka ny voalazan'ny lahatsoratra tao amin'ny Reuters. Fiteny ao am-pon'ny Maraokana ny Darija .
Farany, mizara amintsika ny hetsika fialamboly fahavaratra tao Fez, mankany amin'ny McDonald's, i KEP avy ao amin'ny Four Continents. Hoy ilay bilaogera:
Karazana toerana mihaja sy toerana hialana voly ao Fez ny McDo. Tsia, tena tsy azoko ihany koa izany.
Mitondra ny zanany miaraka maka sary amin'i Ronald ihany koa ny fianakaviana Maraokana.
Saripikan'i KEP avy ao amin'ny Four Continents